//मेरो एक दिन // ~ दीप्सको डायरी
दिप्स शाह on 2:18 AM
सुनसान कोठा ,पल्लो कुनामा बुढी आमै पत्रीका पल्टाउंदैछिन् सर्लाक ,,सर्लाक ,,सर्लाक । study table मा उतानो laptop ,म अनी छरपस्ट copy book pen ,के लेखुँ? आजभोलि कापीमा लेख्नै अल्छि लाग्छ । छिटो पनि सजिलो पनि laptop मा ट्यास् ट्यास् पार्न अनी के को जागर चल्नु कपी मा लेख्न!तर के गरुं के गरुं भएको छ मलाई । छट्पटी खुशी र दु:ख दुई कुराले दिने चै पक्का हो।
तर आजको यो मेरो छट्पटी चै खुशीकै हो । अघी लग्भग एक घण्टा अगाडि अचानक फोनको घण्टी बज्यो किरिङ्ग किरिङ्ग ,,साधारणत यो फोन आउने समय होइन त्यसमापनी मेरो त हुनै सक्दैन तर टेबल मा आँफै भएको हुनाले receve गरें
"मम्मी!!" मेरो सानु पो रहेछ अचम्म! किन यतिबेला अचानक कल गर्यो??
अली गज्याङ गुजुङ बालसुलभ लवजमा उसले सर्सर्ती फोनको प्रयोजन् सुनायो ,म खुशीले अवाक भएं। कुरो के रहेछ भने उसको स्कुलमा अहिले शैक्षिकसत्रको अन्तिम समय चल्दैछ त्यसैले पढाईको साथै अतिरिक्त कृयाकलाप पनि हुँदैरहेछ। उसको क्लास लाई समाबेश गरी गरिएको दौड प्रतियोगीतामा (tube run compitition उसको भनाइ अनुसार)सौभाग्यबस् उस्ले third position ल्याएछ । यही खुशीको खबर बेलिबिस्तार सहित (उस्लाई अगाडि लगियो ,मञ्चमा राखियो ,फूलमाला लगाइयो, cup (maybe trophy) दिईयो ,अरु के के ,,ईत्यादी )भन्यो । मैले पनि खुशीले उफ्रिंदै हौसला र बधाई स्वरुप "आई लव यू!!! भन्दै फोन को बोल्ने डल्लो मै च्वाक्क म्वाइ खाएँ ।
उस्को यो पांच बर्षको उमेरमा ,एल के जी मा उस्ले प्राप्त गरेको उस्को जीवनकै पहिलो सफलता(औपचारिक रुपमा) र पुरस्कार अनी त्यो उद्दिप्त खुशी जतिनै सामान्य भएपनी मैले यस्तो महसुस गरें कि यो नै मेरो जीवनको मुल्यवान् पल र प्राप्ती हो। मनमनै भगवान लाई सम्झिदै धन्यवाद दिएं। मेरो राजालाई लाखौं पटक धन्यवाद दिएं जसको श्रेय र साथले आज मैले यो सब देख्न भोग्न र अनुभव गर्न पाएको छु ।
मन् भरी तर्कनाका छालहरु उठिरहे । यो कती सानो कुरा हो र पनि कती प्रसन्नता लिएरआयो । जिन्दगी एस्तै त छ ,धेरै मुस्किल थोरै सहज ,असन्ख्य बेखुसिहरु -नगण्य खुशी । अस्तब्यस्त बर्तमान् -असिम सपनाहरु । एस्तै स-साना खुशीहरु बटुलेर हाँस्ने हो भने जिन्दगी मज्जा र मिठो छ नत्र त उच्छ्वास र बैराग्यता भन्दा यहाँ अरु के नै छ र??
जब फोन राखेँ ति मेरा जीवनका अनमोल मोतीहरु बाट माइलौँ टाढा ,,एक्लै एक्लै उही सम्बाद सम्झेर मुस्कुराइरहेको पाएँ आफुलाई ।